कराँची विमान क्र्यासः ६० सेकेन्ड अगाडि पाइलटको अन्तिम कल, ‘हाम्रो इञ्जिन बिग्रिएको छ‍‍‍’(भिडियाे)
कराँची, May 22, 2020
शुक्रबार दिउँसो पाकिस्तानमा एक भयानक र ह्रदयविदारक घटना घट्यो। अपराह्न एउटा विमान कराँची एयरपोर्टको नजिक मोडल कोलनी आवासीय क्षेत्रमा खस्यो।
लाहोरबाट कराँची आउँदै गरेको कल साइन पीके८३०३ विमान जिन्ना एयरपोर्टमा अवतरण गर्दै थियो। यसमा पाकिस्तानको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता अब्दुल सत्तर कोखारका अनुसार एयरबस ए ३० मा ९९ यात्रु र ८ जना क्रु मेम्बर रहेकाे थियाे।
दुर्घटना भएको केही समय अगाडि विमानका पाइलट सज्जाद गुलकाे अन्तिम समस्याकाे ‘डिस्ट्रेस कल’ सार्वजनिक गरिएको छ, जसले दुर्घटना हुनुभन्दा केही सेकेन्ड अगाडि के भयो भनेर देखाउँदछ।
पाइलटले एयर कन्ट्रोल रुमलाई इञ्जिनमा खराबी आएको भन्दै सूचना दिएका थिए। एयर कन्ट्रोल रुममा पाइलटले इञ्जिन बिग्रिएको संकेत गरेको केही क्षणमा दर्दनाक क्र्यास भयो।
पाइलट र एयर कन्ट्रोल रुमबीचको कुराकानीको अडियोमा जीवन र मृत्युकाे निर्धारण केही क्षण कसरी गरियो भनेर सुन्न सकिन्छ। यहाँ दुर्घटना हुनुभन्दा ६० सेकेन्ड अगाडि यस्तो कुराकानी टुटेको संकेत बीचको अडियोमा सुनिएको छ।
पाइलटः हाम्रो इञ्जिन बिग्रिएको छ।
एयर कन्ट्रोल रुमः के तपाई बेली ल्याण्डिङको लागि तयार हुनुहुन्छ? दुबै रनवे २.५ अवतरणको लागि उपलब्ध छन्।
पाइलटः मे डे....मे डे....मे डे
त्यसको केही समयपछि नै विमान दुर्घटनाग्रस्त भयो। पीआईएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आधिकारिक विज्ञप्तिमा भनेका छन्,‘ पाइलटले टेक्निकल त्रुटि देखायो। पाइलटलाई भनिएको थियो दुबै रनवे अवतरणको लागि तयार छन्। उनले भने विमानमा के प्राविधिक गल्ती छ मलाई अझै थाहा छैन।’
‘मे डे’ भनेको के हो?
रेडियो सम्पर्कको बेला ‘मे डे’ (Mayday) ‘डिस्ट्रेस कल’ अर्थात समस्यामा हुने बेला जानकारी दिन प्रयोग गरिन्छ। यदी तपाईकाे जीवन खतरामा परेको खण्डमा रेडियोमार्फत् तीन चोटि कन्ट्रोल रूमलाई 'Mayday' भनेर सूचना दिइन्छ। वास्तवमा यो फ्रान्सेली शब्द m'aider बाट आएको हो। जसको अर्थ हो ‘मलाई मद्दत गर्नुहोस्’।
के हाे बेली अवतरण ?
विमान अवतरण गर्नकाे लागि तल ल्याण्डिङ गियरहरू हुन्छ। विमान रन्वेमा साेही गियरबाट अवतरण गरिन्छ। जे होस्, गियर खुल्न नसकेमा विमान अवतरण गर्दा तलकाे भाग प्रयोग गरेर अवतरण गरिन्छ, ताकि यो दुर्घटनाग्रस्त नहोस् र जमिनमा खसाेस्।
कराँची दुर्घटनाको रिपोर्ट अनुसार विमानको ल्याण्डिङ गियर जाम हुँदा यो घरमाथि खसेकाे हाे। अधिकारीहरु आधिकारिकहरु पुष्टिका लागि समयमा पर्खिरहेका छन्।
सबै अस्पताललाई ‘इमर्जेन्सी’ घोषणा
पाकिस्तानको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विमान दुर्घटनापछि लाहोरका सबै अस्पताललाई ‘इमर्जेन्सी’ घोषणा गरेको छ।
विमान दुर्घटना भएको स्थानका केही घर र सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको जनाइएको छ। हालसम्म चार जनाको शव निकालिएको र केहीलाई अस्पताल पुर्‍याइएको सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन्। प्रत्यक्षदर्शीहरुले विमान झरिरहेका बेला पखेेँटाबाट आगो निस्किरहेको र घरको छतमा आएर बजारिएको बताएका छन्।
पाकिस्तानको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको विमान चार वर्षपछि पहिलोपटक दुर्घटना भएको हो। एटिआर ४२ विमान दुर्घटना भएको एक सातापछि पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सका तत्कालिन प्रमुखले राजिनामा दिएका थिए। त्यस दुर्घटनामा ४७ जनाको ज्यान गएको थियो।
निरन्तरको लकडाउनपछि पाकिस्तानमा केही दिनअघि मात्र सिमित घरेलु हवाई उडान खुला गरिएको थियो।
प्रकाशित मिति: May 22, 2020 22:18:23